Halloween အမှီ ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ Kylie Cosmetics ရဲ့ Halloween Collection အကြမ်းကြီး | CosmeticMyanmar
Home » Article » Halloween အမှီ ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ Kylie Cosmetics ရဲ့ Halloween Collection အကြမ်းကြီး
မခိုင်လီကတော့ထုတ်နိုင်တယ်ပဲပြောရမလား? စီးပွားရေးတွေပဲသောင်းကျန်းနေတာလား ဘာလားပဲ? Collection တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်နေတာလေ။ တစ်ခါတစ်ခါထုတ်လိုက်ရင်လဲ အများကြီး။ တော်သေးတယ်မင်မင်က သူ့fan မဟုတ်တာ? အခုလည်း နောက်ထပ် collection တစ်ခုကို launching လုပ်တော့မှာပါ။ ဘာလေးလဲဆိုတော့ Halloween အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ Halloween party တွေအမှီထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီ collection မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာကတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Halloween 2018 အတွက် amazing 3D collection လို့ပြောထားလို့ ဒီဇိုင်းကတော့ အကြွေဆင်ကြီးနေမှာပဲ။ အရောင်တွေကတော့ အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ အရောင်တွေနဲ့ သိပ်အကွာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ Collection တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက ထူးထူးခြားခြားကြီး ကွာသွားတာတော့မရှိပါဘူးနော်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ ဒီ collection ထဲမှာဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း ပစ္စည်း ၆ မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
Metallic formula နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ bullet lipsticks 4ချောင်း
Lip Gloss 1 ခု
Lip Kit 1 ခု
Liquid Glitter Eyeshadow2ချောင်း
Eyeshadow 1 ခု
Highlighter 1 ခု
Lip kit လေးကတော့ bite me ဆိုတဲ့အရောင်လေးပါ။အနီရင့်ရောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ သွေးရောင်တွေလိုမျိုး Vampires တွေကို inspired ယူထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Spooky ဆိုတဲ့ lip gloss အရောင်လေးကိုလည်း ပြထားပါသေးတယ်။ ရွှေအိုရောင် gloss လေးကတော့ ဆိုးလိုက်တာနဲ့ လူအများကြီားမှာထင်းလင်းနေမှာအမှန်အကန်ပါပဲနော်။
Eyeshadow ကတော့အရောင်တွေက glitter တွေပိုများပါတယ်။ Party look တွေဆိုတော့ bling bling နေမှအဆင်ပြေမှာလေ။ အရောင်ကတော့ ၉ ရောင်ပါပါတယ်။ Mummy palette လို့ပေးထားပါတယ်တဲ့။
Highlighter ကတော့ ဒီ collection ထဲက မင်းသမီးလို့ပြောရမှာပဲ။ တွေ့ရခဲတဲ့အရောင်နဲ့ထုတ်ထားလို့ highlighter crazies တွေကတော့ဝယ်ထားသင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်။ Glow effect ကိုအမိုက်စားရနိုင်လို့မိုက်ချက်ပဲ။ အရောင်ကငွေရောင်လိုလို အစိမ်းဖျော့လိုလိုလေးပါ။ နာမည်ကတော့ Go Ghost ပါ။
Liquid Glitter eyeshadow ကတော့ အရောင် ၂ရောင်လာပြီးတော့ရွှေဘက်ကိုဖောက်ထားတဲ့အရောင်တွေပါ။ Witch and famous နဲ့ Hello Ghordeous လို့နာမည်တွေပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးကတော့ lipstick လေးတွေပါ။ ၄ချောင်းထုတ်ထားပြီးတော့ ၂ ချောင်းက matte , ၂ ချောင်းက metallic ပါတာလေးတွေပါ။ Spider Bite, Monster, Haunt it, Creep it real ဆိုပြီး နာမည်လေးတွေပေးထားပါတယ်။
သူက Oct 10 / 12 မှာမှ launching လုပ်မှာဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ပိုင်းတစ်စလောက်နဲ့ my day တွေမှာ ရင်ခုန်အောင်လုပ်နေတာပါ။ စျေးတွေကလည်း မသိသေးတော့ ပိုလို့တောင်ရင်ခုန်သေးတယ်။ Kylie ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကတော့ သေးလှတယ်တော့မရှိပါဘူးနော်။ အခုလည်း Halloween အမှီထွက်တာဆိုတော့ စျေးကြီးမလား? ပုံမှန်စျေးတွေပဲလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါပဲလေ။
ပြီးတော့ သူက collection တစ်ခုလုံးကို အမိုက်စား box ကြီးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အပြင် 3D မျက်မှန်လေးကိုပါထည့်ထားလို့ မိုက်ချက်ပဲ။ မင်မင်ထင်တာကတော့လေ ဘူးဒီဇိုင်းတွေက 3D လိုကြွရွနေအောင်ပြုလုပ်ထားလို့ ထင်ပါတယ်။ ရင်ခုန်ချင်စရာကြီးနော်။
Image source: www.instagram.com/kyliecosmetics/
ထူးထူးဆန်းဆန်း collaboration လုပ်လိုက်တဲ့ Samyang x Tony Moly Hot Edition
Tags: HalloweenKylie cosmetics